Iine hupfumi hwayo hwazvino uye hwakasimba, Germany ndiyo imwe yenyika idzo dzinopa tariro kuvagari vazhinji. Tinogona kutaura kuti inyika inokwezva kwazvo kune dzidzo yemitauro nemikana yemhando yepamusoro yainopa vadzidzi.
Kana nyika muchiGerman ichitaurwa nevanhu vangangoita mamirioni zana, Turkey, uye zvakare nevadzidzi vari munyika medu nekuda kwehukama hwakanaka kuGerman ars ndiwo mutauro unowanzo sarudzwa. Tinoda kupa ruzivo nezve Mutauro Wedzidzo kuGerman, sezvo isu tichifunga kuti zvichabatsira kune vadzidzi vanoda kuwana dzidzo yeGerman kuGerman kumuzinda wavo.
Dzidzo Yemutauro Inopihwa Sei MuGerman?
Tinogona kutaura kuti ichi chisarudzo chakaitwa nevadzidzi vanosarudza Germany yekuGerman Mutauro wedzidzo wakarurama chaizvo. Jerimani inopa mikana yakawanda yevadzidzi maererano nedzidzo, uye nematanho akasiyana ezvidzidzo uye zvirongwa zvedzidzo yepamusoro, zvinopa vadzidzi mukana wekupedza nediploma inogamuchirwa munyika medu nepasirese.
Maguta anosarudzwa neavo vanoda kudzidza mutauro kuGerman ndeMunich, Duesseldorf, Frankfurt neBerlin. Zvidzidzo zvinodzidziswa kuzvikoro zvemitauro kuGerman zvine zvidzidzo zvinosvika makumi maviri. Muzhinji, vhiza yevashanyi yakaringana kune avo vanoda kushanyira nyika kune iyo dzidziso inogara kwemwedzi mitatu. Nekudaro, kune avo vanozove neyakareba nguva yekufunda, zvingave zvakafanira kuwana vhiza yevadzidzi. Tinogona kutaura kuti mapurogiramu akanyanya kufarirwa edzidzo yemitauro kuGerman ndeye chiGerman, bhizinesi chiGerman, gadziriro yeTesDaf yekuongorora yeGerman, yakasimba yeGerman.
Ndeapi mabhenefiti Ekutora Dzidzo Yemutauro kuGerman?
Sezvo chiGerman iri mutauro unonyanya kutaurwa muEurope, vadzidzi vanozove nemukana wakakura maererano nebasa remangwana.
Germany inyika yehupfumi kunyangwe iine mikana yakawanda maererano nedzidzo.
Icho chokwadi chekuti dzidzo yakapihwa kuGerman inopihwa nerutsigiro rwehurumende yakawedzera iwo mhando yedzidzo zvakanyanya.
Turkey iri mukati mepedyo padyo nenzvimbo inobatsira maererano nekuenda kuGerman.
Kune dzimwe nzira dzakawanda apo vadzidzi vanogona kugara zvinoenderana nebhajeti ravo.